Izinto ezibalulekileyo ezifunekayo ukuba zibe yi-Comic Book Letterer
I-letterer yencwadi yamahlaya inika itekisi kunye neziphumo ezivakalayo kwincwadi yemifanekiso . Okubalulekileyo apha kukuongeza isicatshulwa ngendlela eyenza kube lula umfundi ukuba alandele ibali. Kukho ubuninzi bokudala ubugcisa obuya kwinkqubo yokwenza ibhaluni yegama kunye neempembelelo zomsindo zibukeka ngathi zinjani, kodwa i-letterer nayo ifuna ukucinga ngendlela eliza kuphazamisa ngayo itekisi kunye nobugcisa ukuba kunesibindi , kunamandla, okanye kunzima ukufunda.
Uthando Lweelwimi - I-letterer kufuneka iqonde inkqubo yokuhambisa intsingiselo ngokubhaliweyo. Abaninzi beemfestile bazakuzama ukwenza amagama ngokwawo abukeke njengokuba umntu, isidalwa, okanye isiphumo sivakala ngathi. I-BOOM iya kuba yinkulu kwaye ikhaliphe ngelixa i- whisper izothuthuzela kwaye i-airy.
Ulwazi olunamandla lwegrama - I-letterer yenye yeendlela zokugqibela zokukhusela iimpazamo. Kwaye ukuba i-letterer ifune ukuthayipha emsebenzini okanye yenza ngoku ngesandla, ukungabi nolwazi olunzulu lokupela isipelisi, iziphumlisi kunye nokusetyenziswa kwegama kuya kukuvimbela amathuba akho kwimpumelelo.
Cinga i-Graphically - I-Letterers zidla ngokuthatha indima yomqambi wezobugcisa, ukudala ii-logos, izihloko, iibhaluni zegama, iziphumo zomsindo, kunye nokunye. Ngokomzekelo, ukudala isihloko kwi-Comic Sans kuba inegama elihlazileyo kuyo indlela yokufumana amanzi atshisayo. I-letterer kufuneka icinge malunga nendlela izinto ezibonakalayo ezifaka isandla kwiphepha kunye nebali. Ingaba le ngcezu yombhalo ingeza kumava omfundi? Ingaba kunceda ishintsho kwisimo esilandelayo? Le yimihlobo yemibandela oyidingayo ukucinga malunga nokubhala.
Izakhono zobuGcisa - amaninzi amahlaya afakwe kwikhompyutheni. Kukho iiprogram ezininzi ezisebenzisayo, ezifana ne-Adobe Illustrator, Photoshop, kunye ne-Indesign. Ungaphinda ufune ukuqhelanisa nesofthiwe yokwenza ifayile, njengeFontographer, i-FontLab Studio, okanye i-FontForge.
Ukuphakama koPhakamileyo - Ukuba uceba ukwenza incwadi yakho ngesandla, kanti ezinye ziyakwenza, kuya kufuneka uhlakulele isitayela esomeleleyo nesingqinelanayo. Kufuneka kube lula ukufunda nokuhamba kakuhle. Unokuba usenokucinga ukuba ukuguqulwa kwakho kukungena kwifolda kwaye ngokwayo, into eninzi namhlanje.
Isixhobo soLwazi lweeDitress
Ikhompyutheni - Umgangatho woshishino yikhompyutha ye-Macintosh. Ungasebenzisa i-PC, kodwa abaninzi abantu basebenza kuma-Mac. Iitshixo apha zininzi ze-RAM kunye nesantya seprojekthi. Musa ukukhangela ezi zinto.
Iprojekti - Kwakhona, umgangatho woshishino ngu-Adobe Illustrator, inkqubo ejoliswe kumvolisi esebenzisa imizila kunye nemigangatho ngokusekelwe kumalinganiso emathematika ukwenza imifanekiso. Le yinkqubo esetyenziselwa ukubeka iileta kwiphepha. Ezinye iiprogram ezinjengeenkqubo zokudala iifayile zinceda kakhulu kwi-digital letterer.
Indlela yokugcina - Ufuna indlela yokugcina kunye nokuthutha iifayile. Ukuba usebenzela inkampani enkulu, uya kuhambisa izinto nge-FTP iseva. Ukuba ushicilela ngokwakho, uya kufuna enye ifowuni yokugcina ukuyifaka kumshicileli.
Izixhobo zoLuhlu lweZandla
Ipensela - Yintoni oyisebenzisayo kuwe, kodwa abaninzi abaqeqeshi basebenzisa iipencilisi zamashishini.
I-Eraser - Ukuba wenza iphutha, kuya kufuneka ulisuse.
Isikhokelo se-Ames kunye neT-Square - Yiyiphi inkokheli? Isikhokelo se-Ames siyakukuvumela, ngokubambisana ne-T-Square, ukudala imigca eya kukukunceda wenze iileta zakho zibe ziphakame ezifanayo.
I-Crow-Quill iPen kunye neNk - Emva kokuba iileta zenziwe kwipensile, uhamba phezu kwazo ngeyinki. Umgangatho woshishino nguProw-Quill ipeni.
I-Stencils - Uzakufuna i- stencils ezininzi ukudala ibhaluni yegama, imisila kunye nezinye izinto eziyilwe.
Ezinye zeeComic Book Letterers
Ngoko Ufuna Ukuba Yi-Comic Book Letterer?
Qalisa ukwenza! Ukuba ufuna ukuthumela ileta, fumana ezinye zezixhobo uze usebenzise ukukhangela kwakho. Ukuba ufuna ukuba yi-letterer yenkampani enkulu, unokuzama ukubona ukuba enye yee-studio ze-letterer ziqesha njengeComicraft okanye i-Blambot iqesha okanye ifuna abafundi. Iiklasi kwi-design design ingase ibe yindlela yokuhamba.
Ukuhlaziywa kweNcwadi yeComic 300
Manga 101 - Ukuhamba ngokusisiseko-kwi-World World
Yiyiphi iComic Fine?
Leyla al-Qadr: Ubusuku boMbane
Isidingo Sokugqithiswa okuphumelelayo kunye noMgaqo-nkqubo wokuhlambalaza
5 Iincwadi ezilungileyo kakhulu zokufunda kwiholide
Indlela yokudlala i-Cornerback
Ngaba i-Glass ye-Waterze Freeze okanye ibilise kwindawo?
Ngaba Unokuyifaka iCorvette Stingray eYusika?
5 IziNyango eziMgangatho weNdalo
Brittle Stars kwiLwandle
Ukuthinjwa, Ukubalekela nokuFunjwa kweSerial Killer Ted Bundy
Funda Ngexesha elidlulileyo kunye neNxaxheba ngoku
Quotes Wilma Rudolph
Izikolo ezizimeleyo ezizimeleyo eDallas
Uninzi lweeNkcukacha zeNdwendwe zaseKhaya zoLonke ixesha